Compression Rubber richigadzirisa
Liquid Silicone paaivaumba
Plastic jekiseni richigadzirisa
Kudhinda (Screen & Pad)
LSR (Liquid Silicone Rubha)
Nei Tisarudze isu
Chii chinonzi Rubber Inoshandiswa: Iyo 49 Nzvimbo dzaUchaona Rubha
ne admin pane 19-11-05
Chii chinonzi Rubha Inoshandiswa: Iyo 49 Nzvimbo dzaUchaona Rubha Rubha rave rakajairika! Muguta rega rega reAmerica, kuenda kune dzimwe nyika, kuvaka, michina, uye kunyangwe pavanhu, zviri nyore kunongedza kune chimwe chikamu cherabha. Yakarumbidzwa nekuda kwayo yemhando yepamusoro, mipumburu yemarara ...
Ko silicone rabha inouya kupi?
Kuti ubate kuwanda kwenzira dzesilicone rabha dzinogona kushandiswa, zvakakosha kuti uzive kwayakatangira. Mune ino blog, isu tinotarisa kuti silicone inobva kupi kuti tinzwisise zvakawanda nezvehunhu hwayo. Kunzwisisa mhando dzakasiyana dzerabha Kuti unzwisise kuti chii silicone chaunotanga ...
TOP 5 elastomers ye gasket & chisimbiso mafomu
Chii chinonzi elastomers? Izwi iri rinobva ku "elastic" - chimwe chezvinhu zvakakosha zverabha. Izwi rekuti "rabha" uye "elastomer" rinoshandiswa zvakasiyana kureva mapolymers ane viscoelasticity-anowanzo kunzi "kusimba." Izvo zvakasikwa zvimiro zve ela ...
Iwo Top gumi mabhenefiti epurasitiki jekiseni kuumbwa
Kana iwe uri kuverenga iyi blog, ndinofungidzira kuti iwe unotoziva chinhu kana zviviri nezve epurasitiki jekiseni kuumbwa, imwe yeanonyanya kufarirwa nzira dzekuwandisa kugadzira mapurasitiki zvikamu. Kuongorora, tekinoroji iyi inosanganisira yekudyisa epurasitiki zvinhu mumudziyo unopisa. Mashoko acho akasanganiswa ndokuzotungamirwa ini ...
NEI UCHISHANDISA SILICONE rabha?
Nei Uchishandisa Silicone Rubber? Yakatumirwa naNick P musi waFebruary 21, '18 Silicone rubbers zvigadzirwa zverabha zvine zvese organic uye inorganic zvivakwa, pamwe neiyo yakachena kwazvo fumed silica sezvinhu zviviri zvikuru. Ivo vane zvakawanda zvehunhu izvo zvisipo mune imwe kana ...
Zvakanakira uye zvausingakwanisi jekiseni richigadzirisa
Izvo zvakanakira jekiseni kuumbwa pamusoro pekufa kukanda kuumbwa kwave nekukakavadzaniswa kubvira yekutanga nzira yakatangwa muma1930. Iko kune mabhenefiti, asi zvakare nemipimo kune iyo nzira, uye izvo, kunyanya, ndeye-inoda-based. Chekutanga michina vagadziri (OEM) uye vamwe vatengi vanovimba o ...
Yakakosha kudhizaina yerabha keypads
Paunenge uchigadzira yetsika silicone keypad, nyatsoteerera kune iyo nzira iyo makiyi ako anozonyorwa kana kumakwa. Mazhinji keypad dhizaini haidi kumaka, senge keypads iyo inozoitirwa munzvimbo ne (yakanyorwa) bezel yerumwe rudzi. Nekudaro, mazhinji keypads nee ...
Silicone Keypad Dhizaini Mitemo uye Kurudziro
Pano paJWT Rubber isu tine ruzivo rwakakura mune yakasarudzika silicone keypad indasitiri. Nechiitiko ichi isu takamisa mimwe mitemo uye mazano ekugadzirwa kwesilicone rubber keypads. Pazasi pane mimwe yemitemo iyi uye kurudziro: Iwo mashoma radius cap ...
Musiyano Pakati Rubber uye Silicone
Ose marabha uye silicone maelastomers. Izvo zvinhu zvepolymeric izvo zvinoratidza iwo viscoelastic maitiro, ayo anowanzo kunzi kuomarara. Silicone inogona kusiyaniswa kubva kune rubbers nemaatomu mamiriro. Uye zvakare, silicones ine zvimwe zvakakosha zvivakwa tha ...
RIMOTE DZIDZISO YEMUDZIMAI MUDZIMAI MUDZIMAI
Remote control chinhu chekupinza chinogona kushandiswa kudzora chidimbu chemidziyo yemagetsi iri kure nemushandisi. Remote kutonga kunoshandiswa mune yakakura mhando yevatengi emagetsi zvigadzirwa. Zvakajairika kure kudzora kunyorera zvinosanganisira terevhizheni seti, mabhokisi mafeni, odhiyo michina, uye imwe mhando ...
Sei Iyo Silicone Keypad Inoshanda?
Kutanga, ngationei kuti chii Silicone Keypad? Silicone rubber keypads (inozivikanwawo seElastomeric Keypads) anoshandiswa zvakanyanya mune ese mutengi uye maindasitiri zvigadzirwa zvemagetsi semutengo wakaderera uye hwakavimbika switching mhinduro. Mune fomu yayo yakakosha, silicone keypad iri "mask" iyo ...
Rubber Keypads Inoshanda Sei?
Rubber Keypads Inoshanda Sei? Irabha keypad membrane switch inoshandisa kumanikidza-kuumbwa silicone rabha ine inoitisa kabhoni mapiritsi kana neasina-kuitisa mabara mactuator. Iyo yekumanikidza yekuumba maitiro inogadzira angled webhu kutenderedza keypad nzvimbo. Kana keypad ikadzvanywa, iyo tambo inodonha iwe ...
Zvese Zvaunoda Kuti Uzive Nezve jekiseni Kuumbwa
Chii chinonzi jekiseni Kuumbwa: Jekiseni Kuumbwa inzira yekugadzira yekugadzira zvikamu muhombe vhoriyamu. Iyo inowanzo shandiswa mukuwanda-kugadzirwa kwemaitiro uko chikamu chimwe chete chiri kugadzirwa zviuru kana kunyangwe mamirioni enguva mukuteedzana. Ndeapi mapolymers ari iwe ...
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve ABS Plastiki
ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) ipurasitiki iri terpolymer, polymer ine matatu matatu akasiyana monomers. ABS inogadzirwa nepolymerizing styrene uye acrylonitrile pamberi pe polybutadiene. Acrylonitrile inogadzira monomer yakaumbwa ne ...
36 Zvakajairika Mapurasitiki Zvinhu Zvaunofanira Kuziva
Izvi zvinotevera sarudzo yemapurasitiki izvo zvinogara zvichishandisirwa munzvimbo yedu yekugadzira. Sarudza mazita ezvinhu pazasi kuti uwane tsananguro pfupi uye kuwana kune data reimba. 1) ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene inogadzirwa ne ...
Ndeupi Musiyano Pakati PeSilicone Rubber uye EPDM?
ne admin pane 18-11-05
Pakusarudza rabha yekushandisa, maInjiniya mazhinji anopedzisira ave kuda kuita sarudzo pakati pekusarudza silicone kana EPDM. Isu zviri pachena tine sarudzo ye silicone (!) Asi vaviri vacho vanowirirana sei vachipesana? Chii chinonzi EPDM uye kana iwe ukazviwana iwe uchida kusarudza betw ...
Xiamen Jin Weitai (jwt) Rubber & Plastiki Co, Ltd.
Kwete # 39, Lianmei Second Rd, Lian Hua Town, Tong 'dunhu, Xiamen Guta, dunhu reFujian, China.
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Mobile Site
Radiator Rubber Isolators, Radiator Rubber Gomo, Passive Bass Radieta, Bass Radiator, Passive Radieta, Diki Aluminium Led Radieta,
Nguva uye kuvanzika